Home Wararka Booliska DFS oo sheegay oo ay gacanta ku dhigeen Ragii dhibateeyay Ubax...
Booliska DFS oo sheegay oo ay gacanta ku dhigeen Ragii dhibateeyay Ubax Ibraahim
Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen dhamaan eedeysanayaasha la rumeysanyahay in ay dhibaateeyeen ubax ibraahim Cabdullaahi. Ubax Ibraahim Cabdullaahi oo 15 sano jir ah waxay la dhultaallaa dhibaatooyin loogu geystay Gobolka Gedo, kuwaas oo isugu jira jirdil, gubis iyo in labada gacmood looga xiray sil sillad sida ay Warbaahinta u sheegeen dhaqaatiirta gacanta ku haysa kiiskeeda ee Isbitaalka Madiina ka howlgala.
Warka kasoo baxay booliska Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Eedeysaneyaasha dhawaan ay la wadaagi doonaan dadka Soomaliyeed faahfaahin la xariirta sida wax u dhaceen. Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa shalay sheegay in Cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dembeeyey dhibaateynta Ubax Ibraahim Cabdullaahi.
Previous articleBaarlamaanka Puntland oo la filayo inuu maanta magacaabo Guddiga Doorashada Aqalka sare
Next articleWaa maxay talooyinka ay soo jeediyeen gudigii RW Roble u diray Gobolka Gedo?
Jubbaland oo go’aan ka qaadatay ismari waaga khilaafka Doorashooyinka
Puntand & Jubbaland oo ka caga-jiidaya in ay soo gudbiyaan Gudiga...